အမေ့ကို ပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ခဏခဏ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပြန်ပြောမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး … - Real Gaming
••အမေ့ကို အာခံ၍ ပြန်မပြောခင်..••
တစ်ခုသော နံနက်ခင်း အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကောင်လေး တစ်ယောက်အား အိပ်ယာမသိမ်းမိလို့ မိခင်ဖြစ်သူက “ထမင်းစားချိန်မှန်းလဲမသိ အပြင်ထွက်လည်းမိဘဆီ ခွင့်မတိုင် ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ တစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . .” အစရှိသဖြင့် ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာ သားဖြစ်သူက သီးမခံနိုင်လို့……
“ဟာဗျာ အမေကလည်း ကျွန်တော်က ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး တစ်နေ့လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့ နားငြီးတယ်ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော် ကြိုက်သလိုနေပေါ့ အမေမစပ်စုချင်ပါနဲ့..လို့ သူ့အမေကို အသံကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်…..
အမေကတစ်လှည့် သားကတစ်လှည့် စကားများကြရာက အနီးအနားမှာထိုင်နေတဲ့ အဖေဖြစ်သူက ကြားပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ သူ့သားကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ “သားရေ..အဖေ့ဆီ လာပါဦးကွာ”….
သားဖြစ်သူက ခြေဆောင့်ရင်း အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီး အဖေခေါ်ရာကို လိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဖေဖြစ်သူကသားပခုံးကို လှမ်းဖက်ရင်း အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်….
“သား..ဘာဖြစ်လို့ အမေ့ကိုပြန်ပြောနေရတာလဲ” “အဖေကလည်း ကျွန်တော်က ကလေးမှမဟုတ်တော့တာ နေ့တိုင်း
လိုလို ကျွန်တော်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ် နေ့တိုင်း ဆူပူနေတယ် ကျွန်တော် ဒီအိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူး ဖေဖေရယ်”….
“အော်..သားက မေမေ့ဆိုဆုံးမစကားတွေ ဆူတယ်လို့ထင်နေတာကိုး မေမေ မဆူအောင် မေမေ့ပြောတဲ့အတိုင်း ငါ့သားနေပေါ့ကွ” “ဖေဖေလည်း မေမေ့လိုပဲ သားကို မချစ်ဘူးပေါ့ “…..
“မဟုတ်ပါဘူးသားရယ် ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကို လမ်းမှားမရောက်စေချင်ဘူး ကြိုတင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့
ပြောဆိုဆုံးမနေတာ” “တော်ပြီ..ဖေဖေလည်းမေမေ့လိုပဲ သားကို အကောင်းမမြင်ဘူး ဆူဖို့ပဲ”…..
“ကဲ ဖေဖေတစ်ခုပြောမယ် သေချာနားထောင်” “ဘာပြောမှာလဲဖေဖေ သားနားထောင်နေတယ်” “သားက မေမေ့ကို တစ်ခွန်းမကျန် အာခံပြန်ပြောတယ်နော် သား သေချာစဉ်းစား” “သား ပြန်ပြောမှာပေါ့ဖေဖေ နေ့တိုင်းဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်
ဆိုတော့ သား နားငြီးတယ်”….
“ကဲ ဒါဆိုဖေဖေ အချက် ၁၀ ချက်ပြောပြမယ် အဲဒီအချက် ၁၀ ချက်လုံး သားလိုက်နာနိုင်ရင် သားမေ့မေ့ကို ကြိုက်သလို
အာခံပြီးပြန်ပြောလို့ရပြီ” “ပြောပါ ဖေဖေ သားနားထောင်ပါ့မယ်” ဒါဆိုသေချာနားထောင်….
၁။။ သုံးလတိတိ သားထမင်းစားပြီးတိုင်း အန်နိုင်မလား … ?
၂။။ သားရဲ့ဝမ်းဗိုက်ထဲဘောလုံးထည့်ပြီး ကြီးမားလာအောင် တစ်လတစ်ခါ ရေထိုးသွင်းမယ် တစ်ဆယ်လတိုင်တိုင် သားအလေးခံပြီး သယ်ထားနိုင်မလား … ?
၃။။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မုန့် အစားအစာတွေ မစားပဲ ခြောက်လတိုင်တိုင် အငတ်ခံနေနိုင်မလား … ?
၄။။ ညညအိပ်ရင်လည်း ဘယ်ညာ မစောင်းပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ၅ လတိုင်တိုင် အိပ်နိုင်မလား … ?
၅။။ ၈ လတိုင်တိုင် ဆော့ကစားတာတို့ လျှောက်လည်တာတို့ ကခုန်တာတို့ မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနိုင်မလား … ?
၆။။ နာဖျားလို့မရှိအောင် ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်နေရလို့ ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေ မစားပဲနေမယ် ဖျားနာခဲ့ရင်တောင် ဆေးတွေစိတ် ကြိုက်စားခွင့်မရှိပဲ ၁၀ လအထိ သားနေနိုင်လား … ?
၇။။ ၁၄ နာရီအကြာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး နာကျင် ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာ သားခံနိုင်မလား … ?
၈။။ ကိုယ့်နို့သီးခေါင်းကို ကိုက်ရင် နာပေမယ့် ၁၀ လအထိ အောင့်အည်းသီးခံနိူင်မလား … ?
၉။။ ချီးတွေ၊ သေးတွေ၊ အန်ဖတ်တွေ ၂ နှစ်တိုင်တိုင် သားကကြုံးနိုင်မလား … ?
၁၀။။ ညညဆိုရင်လည်း နှစ်နာရီတစ်ခါ တစ်နှစ်လုံးလုံးအိပ်ရေး ပျက်ခံပြီးထနိုင်မလား … ?
” ကဲ..သား အဲဒီအချက်၁၀ ချက် လိုက်နာလို့နိုင်မလား တကယ်လို့ သားက တစ်ချက်မကျန် လိုက်နာနိုင်ရင် မေမေ့ကို ကြိုက်သလို အာခံပြီး ပြန်ပြောလို့နိုင်ပြီ”…..
သားဖြစ်သူက ခေတ္တမှိုင်ပြီး အတွေးတစ်ခုဝင်လာကာ “ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ သားနားလည်ပါပြီ နောက်ဘယ်တော့မှ
မေမေ့ကိုရော ဖေဖေ့ကိုပါ သားပြန်မပြောတော့ပါဘူးလို့ သားကတိပေးပါတယ်ဖေဖေ”….
“ကဲ..သားလိမ္မာလေး မေမေ့ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး ကန်တော့လိုက်နော် ……………….
အမကေို့ ပွနျပွောတော့မယျဆိုရငျ ဒါလေးကို ခဏခဏ ပွနျဖတျကွညျ့ပါ။ ဒါဆိုရငျ ပွနျပွောမိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး …
••အမကေို့ အာခံ၍ ပွနျမပွောခငျ..••
တဈခုသော နံနကျခငျး အထကျတနျးကြောငျးသားအရှယျ ကောငျလေး တဈယောကျအား အိပျယာမသိမျးမိလို့ မိခငျဖွဈသူက “ထမငျးစားခြိနျမှနျးလဲမသိ အပွငျထှကျလညျးမိဘဆီ ခှငျ့မတိုငျ ကွညျ့စမျး ဘယျအခြိနျရှိနပွေီလဲ တဈနကေုနျ ဂိမျးဆော့နေ. . .” အစရှိသဖွငျ့ ဆူပူကွိမျးမောငျးကာ သားဖွဈသူက သီးမခံနိုငျလို့……
“ဟာဗြာ အမကေလညျး ကြှနျတျောက ကလေးမဟုတျတော့ဘူး တဈနလေုံ့း ဗဈြတောကျဗဈြတောကျနဲ့ နားငွီးတယျကြှနျတျောဟာ ကြှနျတျော ကွိုကျသလိုနပေေါ့ အမမေစပျစုခငျြပါနဲ့..လို့ သူ့အမကေို အသံကွီးဟဈကယျြနဲ့ ပွနျပွောခဲ့တယျ…..
အမကေတဈလှညျ့ သားကတဈလှညျ့ စကားမြားကွရာက အနီးအနားမှာထိုငျနတေဲ့ အဖဖွေဈသူက ကွားပွနျဖွတေဲ့အနနေဲ့ သူ့သားကို ချေါလိုကျပါတယျ။ “သားရေ..အဖဆေီ့ လာပါဦးကှာ”….
သားဖွဈသူက ခွဆေောငျ့ရငျး အိမျပျေါကနဆေငျးသှားပွီး အဖခေျေါရာကို လိုကျခဲ့ပါတယျ ။ အဖဖွေဈသူကသားပခုံးကို လှမျးဖကျရငျး အပွငျဘကျကို လမျးလြှောကျထှကျခဲ့ပါတယျ….
“သား..ဘာဖွဈလို့ အမကေို့ပွနျပွောနရေတာလဲ” “အဖကေလညျး ကြှနျတျောက ကလေးမှမဟုတျတော့တာ နတေို့ငျး
လိုလို ကြှနျတျောကိုအပွဈမွငျနတေယျ နတေို့ငျး ဆူပူနတေယျ ကြှနျတျော ဒီအိမျမှာ မနခေငျြတော့ဘူး ဖဖေရေယျ”….
“အျော..သားက မမေဆေို့ဆုံးမစကားတှေ ဆူတယျလို့ထငျနတောကိုး မမေေ မဆူအောငျ မမေပွေ့ောတဲ့အတိုငျး ငါ့သားနပေေါ့ကှ” “ဖဖေလေညျး မမေလေို့ပဲ သားကို မခဈြဘူးပေါ့ “…..
“မဟုတျပါဘူးသားရယျ ဘယျမိဘကမှ ကိုယျ့သားသမီးကို လမျးမှားမရောကျစခေငျြဘူး ကွိုတငျတားဆီးတဲ့အနနေဲ့
ပွောဆိုဆုံးမနတော” “တျောပွီ..ဖဖေလေညျးမမေလေို့ပဲ သားကို အကောငျးမမွငျဘူး ဆူဖို့ပဲ”…..
“ကဲ ဖဖေတေဈခုပွောမယျ သခြောနားထောငျ” “ဘာပွောမှာလဲဖဖေေ သားနားထောငျနတေယျ” “သားက မမေကေို့ တဈခှနျးမကနျြ အာခံပွနျပွောတယျနျော သား သခြောစဉျးစား” “သား ပွနျပွောမှာပေါ့ဖဖေေ နတေို့ငျးဗဈြတောကျဗဈြတောကျ
ဆိုတော့ သား နားငွီးတယျ”….
“ကဲ ဒါဆိုဖဖေေ အခကျြ ၁၀ ခကျြပွောပွမယျ အဲဒီအခကျြ ၁၀ ခကျြလုံး သားလိုကျနာနိုငျရငျ သားမမေ့ကေို့ ကွိုကျသလို
အာခံပွီးပွနျပွောလို့ရပွီ” “ပွောပါ ဖဖေေ သားနားထောငျပါ့မယျ” ဒါဆိုသခြောနားထောငျ….
၁။။ သုံးလတိတိ သားထမငျးစားပွီးတိုငျး အနျနိုငျမလား … ?
၂။။ သားရဲ့ဝမျးဗိုကျထဲဘောလုံးထညျ့ပွီး ကွီးမားလာအောငျ တဈလတဈခါ ရထေိုးသှငျးမယျ တဈဆယျလတိုငျတိုငျ သားအလေးခံပွီး သယျထားနိုငျမလား … ?
၃။။ ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျ၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့မုနျ့ အစားအစာတှေ မစားပဲ ခွောကျလတိုငျတိုငျ အငတျခံနနေိုငျမလား … ?
၅။။ ၈ လတိုငျတိုငျ ဆော့ကစားတာတို့ လြှောကျလညျတာတို့ ကခုနျတာတို့ မလုပျပဲ အိမျထဲမှာပဲ နနေိုငျမလား … ?
၆။။ နာဖြားလို့မရှိအောငျ ကိုယျ့ကိုဂရုစိုကျနရေလို့ ကွိုကျတဲ့အစားအသောကျတှေ မစားပဲနမေယျ ဖြားနာခဲ့ရငျတောငျ ဆေးတှစေိတျ ကွိုကျစားခှငျ့မရှိပဲ ၁၀ လအထိ သားနနေိုငျလား … ?
” ကဲ..သား အဲဒီအခကျြ၁၀ ခကျြ လိုကျနာလို့နိုငျမလား တကယျလို့ သားက တဈခကျြမကနျြ လိုကျနာနိုငျရငျ မမေကေို့ ကွိုကျသလို အာခံပွီး ပွနျပွောလို့နိုငျပွီ”…..
သားဖွဈသူက ခတ်ေတမှိုငျပွီး အတှေးတဈခုဝငျလာကာ “ဟုတျကဲ့ဖဖေေ သားနားလညျပါပွီ နောကျဘယျတော့မှ
မမေကေို့ရော ဖဖေကေို့ပါ သားပွနျမပွောတော့ပါဘူးလို့ သားကတိပေးပါတယျဖဖေေ”….
“ကဲ..သားလိမ်မာလေး မမေကေို့ ဝနျခတြောငျးပနျပွီး ကနျတော့လိုကျနျော ……………….